Duterte, “Argagixisada waa Shiilanayaa oo Cunayaa!” – Radio Daljir
Duterte, “Argagixisada waa Shiilanayaa oo Cunayaa!”
Abriil 26, 2017 3:29 g 0
Madaxweynaha dalka Filibiin (the Philippines) oo dagaal adag kula jira argaxisada abu Sayyaf iyo ganacsatada daroogada maandooriyaha ayaa hanjabaadihiisa gaarsiiyey heerkii ugu danbeeyey. Shalay oo Axad ahayd wuxuu ku khudbeeyey in haddii ciidamadu ay argagixisada nolol ku soo qabtaan “uu mid-mid u cuni doono!” Intaas kuma uu joojin e wuxuu yiri, “haddii aniga oo caraysan la ii keeno mid xagjir ah, cusbo iyo khal ii soo raacsha, anna igu halleeya in aan beerkiisa shiisho!”
Duterte waa madaxweynihii 16aad ee Filibiin, waxaa la doortay bishii May 2016, jagada sarena wuxuu la wareegay 30kii Juun 2016. Madaxweynaha oo ahaan jiray guddoomiye degmo ayaa lagu doortay ballanqaad ah in uu tirtiri doono kuwa maandooriyaha ka beecmushtara, argagixisada Abu Sayyaf, inta wax musuqmaasuqda iyo inta wax-isdaba-marisa oo dhan. Halkudhigyadiisa waxaa ka mid ahaa “5 xabbo ku dhufta kii sharciga iyo danta Filibiinka ka horyimaada!”
Duterte ayaa lagu eedey, caalamkuna dhowr jeer uga digay, in uu joojiyo laynta dambiilayaasha lagu laayo si sharci-darro ah. Laakiin dadka Filibiin ee doortay ayaa aad ula dhacsan shaqada uu hayo, asaga oo mar kasta ku jawaaba, “aniga Filibiinka baa i doortay ee beesha caalamku ima dooran!”
Sannadkii hore Madaxweyne Obama ayaa uga digay dilalka sharcidarada ah, laakiin Duterte ayaa ku jawaabay “hooyadii ku dhashay ee sharmuutada ahayd u sheeg!” Intaas ugama uu harin ee wuxuu ku daray, “Maraykanku qalabkiisa Filibiin ha ka aruursado, halkaan lagama rabo, waxaana xiriir toos ah oo xushmad leh hadda la galayaa Ruushka iyo Shiinaha!”
Duterter oo afxumada aan ka xishoon ayaa ah madaxweyne dadkiisa weli aad u jecelyihiin, rajo fiicanna ka qabo in uu tirtiri doono argagixisada iyo ganacsatada maandooriyaha.
Maqaalo Kale 272 Wararka 19824
IRC oo Degmada Burtinle Gaartay (Dhegayso)
Farmaajo oo Magacaabay Maareeyaha Guud ee Hey’adda Saadaasha iyo Duulista Hawada